Abathengi babanceda njani abathengi ukuba bathenge ikhaya? -Bhlogi beNdawo ethengisa izindlu nomhlaba - realtyWW:
Abathengi babanceda njani abathengi ukuba bathenge ikhaya?
EyoKwindla 15, 2019 by Royal52, Iimbono zizonke:
Ukuthenga ikhaya ngokungathandabuzekiyo sesinye sezona zigqibo zikhulu ebomini bakho. Kuba kubandakanya imeko yezomthetho, kufuneka uyinyamekele ngokufanelekileyo uqinisekisa ukuba utyalomali lwakho olukhulu ngemali kunye nexesha alihambi. Kulapho ke udlulisayo luza kudlala indima yalo.
Nazi iindlela ezimbalwa ezikhankanyiweyo apho ugqirha odlulisayo anokukunceda ukuba uthenge ikhaya.
Nje ukuba uthathe isigqibo sokuthenga ipropathi ethile, uyakuya kufuna ukuba udlulise isigulana ukukunceda utywine isivumelwano ngokugcina izinto zomthetho. Ukuba ngethamsanqa unesidlwengu esifanelekileyo nesinokuthenjwa, uya kuphatha onke amaxwebhu akho asemthethweni ngokwenza isivumelwano sokuthengisa kunye nokutshintshana nomthengisi. Uya kuthi emva koko akuncede uphonononge ikhontrakthi yentengiso ukuze uqonde imigaqo kunye neemeko zayo ngokuchanekileyo.
Emva koko, ebeya kuhlola ipropathi ngokuqhuba ngemvelaphi kunye nezatifikethi zitshekhi ngexesha lokuhlala kwemvumelwano.
Uya kwenza uhlengahlengiso oluyimfuneko ngexesha lokuhlala ngokuthatha irhafu yomhlaba, iirhafu zamanzi, ibhunga, kunye nezinye iintlawulo ezongezelelweyo. Uya kugcwalisa amaxwebhu epropathi kunye nokuhanjiswa komhlaba.
Umdluliseli uya kukunika isixa esibhaliweyo sokugqibela ngaphambi komhla wokuhlawulwa, ukuqinisekisa ukuba uyaqhubeka ngenkqubo yokuthenga ekhaya. Iya kuba noxanduva ukunxibelelana neebhanki ukulungiselela umyinge wexesha elichaziweyo.
Ngomhla wokuhlawulwa, umhambisi wakho uza kuzisa iifomu zomsebenzi wesitampu, iifayile zobambiso, amaxwebhu okudlulisela amanye amaxwebhu abalulekileyo asemthethweni kummeli wabathengisi egameni lakho.
Lelona nyathelo libalulekileyo nelilandelwa ngumdlulisi ngendlela efanelekileyo njengoko ethumela iingxelo zokuthengisa kwintengiso yomthengisi oya kuthi akhuphe izitshixo kuwe. Kuyanceda ukuqinisekisa ukuba ekugqibeleni ufumana izitshixo zekhaya lakho elitsha.
Emva kokuhlawulwa, umhambisi kufuneka athumele amaxwebhu okudlulisela kwiofisi yobhaliso lomhlaba ukwenza ukuba ufumane ubunini bepropathi ngokusemthethweni nangokusemthethweni.
Umdlulisi uqinisekisa ukuba ukhuphe iintlawulo zokugqibela kumthengisi ngotshintshelo lwebhanki ngomhla wokugqitywa.
Emva komhla wokugqitywa, umdluliseli uhlawula irhafu yomhlaba egameni lakho kwaye uthumele amaxwebhu akho okudlulisela kuwe kwiintsuku ezili-15 ukuya kwezingama-20. Kwimeko yokubolekwa kwemali, uya kuthumela ikopi yemicimbi yetyala kumbolekisi njengesiqinisekiso sokubuyela kwangexesha.
Njengokuba ngoku uyiqonda ngqo eyona njongo yomdlulisi, luxanduva lwakho ukuqinisekisa ukuba uqasha nabaphi na abathembekileyo abaziwayo nabaziwayo njengo Eyona nto iKhonkco yoQinisekiso eqinisekisa ukuba inkqubo yakho yokuthenga iyaphela ngaphandle kwengxaki yomthetho okanye ukuxakeka.
Royal52 Matshi 15, 2019
Olu ngeno yafakwa kwi Ukuphucula iKhaya noqhotyosho Thenga, ukuthenga, Ukuthenga ikhaya, Ukuthenga indlu, Ukuthenga ikhaya elitsha, Ukuthenga iipropathi, Ukuthenga indlu edolophini, Ukuthenga ngePropathi yokuTyala, ukuthenga indlu, ukuthenga impahla, ukuthengisa. Bookmark le Permalink.
Oktobha 7, 2016 Ukuthenga iintsomi apha ekhaya vs iinyani Ukuthengiswa kwempahla nomhlaba kusenokwenzeka ukuba kungenye yamashishini amaninzi afuna ukubandakanyeka kwabathengi iminyaka engama-20 okanye engama-30. Kunqabile ukuba abemi abaneminyaka engama-70 nangaphezulu bafumane imali-mboleko yeminyaka engama-30. Ewe, kunokwenzeka ukuba ngaloo minyaka banamanqaku okuthenga ngetyala kunye nembali ende ende. Nokuba yeyiphi na iminyaka yakho, uhlala unethuba lokufumana imali mboleko yendlu (kuba, masithembeke, bambalwa abantu abanako ukufumana indlu ngaphandle kwemboleko, kodwa bade bangayenzi loo nto ukuze […] exhonyiweyo Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba
Oktobha 7, 2016 Amanyathelo angama-20 xa uthenga iKhaya lakho lokuQala kunye nezinto ezingaphaya kuLuhlu Ngokuqinisekileyo uyazi ukuba iibhanki zibonelela ngamagama akhethekileyo, anomdla ngakumbi okokuqala kubathengi basekhaya. Kwaye ayisiyo ngoba ilunge kakhulu kwaye inesisa kwaye iyayixhasa kwiintsapho ezitsha (oko kukuthi abathengi besiqhelo aba). Kungenxa yokuba isigqibo sokuthenga indlu yenye yezona zinzima kwaye zinoxanduva kakhulu kubantu abaninzi, kwaye kulula kancinci ukwenza ingqangi yakho xa uthe wanikwa isaphulelo okanye olunye uhlobo lwezibonelelo. Ukugcina imali yentlawulo ephantsi, ukuba ulungile […] exhonyiweyo Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba